Posted by လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် at 06:36
အဟီး မိုက်တယ် ကွာ...
နောက်ပိုင်းဇာတ်ထုတ် အကိုသိနေလို့ မဖတ်ရလည်း
နေပါစေ... နောက်ဆုံးရေးထားတဲ့ စာကြောင်းတော့
အရမ်းခိုက်ပဲ ... ဘာတဲ့ စံပယ်ချစ်လင် ကိုလွင်ပြင်
တဲ့ အဟီး ကာရံညီလိုက်ပုံ များ ကိုယ့်မိန်းမတောင်
နာမည်ပြန်ပြောင်းခိုင်းရလို ဖြစ်နေပြီ :P အားပေး
ပိုင်သကွာာာာာ ကာရန်တွေ နဘေတွေနဲ့ အဟစ် :P
စံပယ်ချစ်လင် ကိုလွင်ပြင်တဲ့ အတော်မိသဟ
ဖတ်ရတာ အတော်ရသမြောက်တယ်.. နောက်ပိုင်းစာမျက်နှာတွေမှာ.. အဲလိုလူမျိုးလေးများ ထပ်တွေ့နေရမလားနော် :D
အစ်ကို အဲ့လိုရေးတာ အရမ်းသဘောကျတယ်. ။အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတယ်အစ်ကို. သမားရိုးကျ စကားပြေတစ်ပုဒ်ထက် အများကြီးရသမြောက်သွားတယ်.။
တွေ့လား အားပေးကြတာ....။ ဆက်ရေးပါ စံပယ့်ချစ်လင် ကိုလွင်ပြင်...ဟိ ဟိ...း))
အားကျမိပါရဲ့ ... အစ်ကိုရေ
ဒီလိုလေး ချစ်သူနဲ့ ဘဝခရီးကို
ကဲ... နော် မပြောဘူးလား... ဒီတစ်ပုဒ်လေးက တော်တော်မိုက်... :D
တစ်ချက်ခုတ် သုံးချက်ပြတ်ဆိုတာ ဒါပဲထင်ရဲ့...အံမယ်မင်း အနှီလိုလူကိုမှ ဂျက်တို့ ဂရုမစိုက်ရင် ဒီကလေးမအသည်းက သံမဏိနဲ့ လုပ်ထားတာပဲ ဖြစ်ရမယ်...း)
အိုင်ဒီယာလေးကိုသဘောကျတယ်...း) စိတ်ကူးကောင်းလိုက်တာ
အားပေးဒယ်ဗျာ ရေးဖွဲထားတဲ့ ပုံစံလေးကို
ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို သဘောကျမိပါကြောင်း...
ကဲ ပြောဘူးလား သများပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်
ကောင်းလိုက်တဲ့ အရေးသာ .... အထက်ကပြောခဲ့တဲ့သူတွေလို ပဲ ပြောပါရစေ ...
စံပယ့်ချစ်လင် ... ကိုလွင်ပြင် ... ရေ ...
နောက်စာမျက်နှာ တိုင်း ချစ်ခြင်းတွေ ဆင့်ကဲ နိုင်ကြပါစေ ဗျာ .... ။
ဒုတိယပိုင်းလေးများ ရှိရင် ဆက်ဖတ်ချင်သေးတယ် ကိုလွင်ပြင်ရေ...
Ko Naw(WisdomLife) said...